थाहा खबर: चेतन पाण्डे
प्रकृतिसँग नजिक हुने बहाना पाउँदा म कहिल्यै नाइँ भन्दिनँ। घुमघाममा निकै सोख पनि छ। त्यस्तै सोच राख्छ भनेर सायद भगवानले पनि कुनैबेला सृष्टिको अनुपम उदाहरण मानिएको काठमाडौं उपत्यकामा जन्माएर पठाएका होलान्। तर, उनलाई के थाहा उनको सृष्टिको विशिष्ट कल्पना वाक्क&ndas...
अविरल बग्ने नदी मात्र होला जो आफ्नो मार्गमा आउने हरेक बाधा व्यवधानलाई पन्छाउँदै अविचलित अघि बढिरहन सक्ने। हावा र बादल त पहाडसँगको एक ठक्करमा समेत विचलित बनिदिन्छन्। समयका पाइलैपिच्छे आउने व्यवधानलाई हाँसोले सामना गर्दै लोभलाग्दो जिन्दगी जिउने पनि कहाँ सजिलै भेटिएलान् ...
‘टु इडिएट्स’ को काठमाडौं–चेन्नाई यात्रा
हरेक व्यक्तिको जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ। मैले देखिरहेको संसारका कतिपय विम्ब अरूले नदेख्न पनि सक्छन्। मलाई राम्रा लागेका विषय कतिपयलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्ला। तर, जे भए पनि जीवन फूलको गुच्छा हो। जहाँ सुगन्धको भण्डार हुन्छ, मिठासको महासागर हुन्छ। बस्, हेर्ने...
‘हामी भगवानलाई किन पुज्छौँ थाहा छ? किनकि हामीभित्र ऊप्रति विश्वासभन्दा बढी भय छ,’ कुनै हिन्दी फिल्ममा बोलिएको यो डाइलग हाम्रो मनोभावसँग निकै मेल खान्छ। वास्तवमा हामी हिन्‍दु, भगवानलाई अति माया गर्छौं, आस्था पोख्छौं। मनभरि माया, स्नेह र आस्था भरिभराउ...
समय जति बलवान हुन्छ, मन त्योभन्दा बेगवान अनि शरीर निकै नै कमजोर। जबसम्म समय र मनको गतिलाई पकडमा राख्न सकिन्छ, शरीरले पनि सोचे जस्तो साथ दिन्छ, नत्र जिन्दगी नै अलपत्र। मैले यस पटक लेख्न लागेको विषय धेरैलाई नौलो नहुन पनि सक्ला। कतिपयलाई बिलकुलै नौलो। तर, मैले जीवन...
जीवनमा कहिले काहीँ यति मिठो संयोग जुर्छ, जसलाई सपनामा पनि सायदै कल्पिएको होला। तर, त्यस्ता कतिपय संयोग यही जन्मको पुण्यका कारण पनि जुरेका हुन सक्लान्। बितेका केही महिना उमंग र उत्साहविहीन रहे, ममीको स्वास्थ्यका कारण। शायद गुलाफ सुगन्धको मात्र पर्यायवाची ...
समय भेल न हो, अनायास झस्काउँदो रहेछ। चस्काउँदो रहेछ। खोतल्दै जाँदा त्यही भेलको भँगालोमा रुमल्लिरहेका अनेकौँ सम्झना अनायास आँखाभरि घुम्दो रहेछ। यही समयको भेलले जीवनका अनेकौँ सम्झनालाई मस्तिष्क ताजै राखे पनि ती सम्झनासँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई भने कहिले टाढा ल...
चाहना र सपना त आखिर बादल नै त हुन्। हरेक हेराइ र पर्खाइसँगै आकार बदल्ने, स्वरूप बदल्ने। नीलो आकाशलाई क्यानभास बनाएर। जसरी कालो निद्रालाई क्यानभास बनाएर जीवनका अपूरा र अधुरा सपना पूरा गर्ने चाहना सधैँ मनमा पलाइरहन्छ। तर, मैले अहिलेसम्म दोहोर्‍याएर कुनै सपना देख...
समयको कुनै सीमा हुँदैन। अनि मृत्युको आभाष। जबसम्म यो लोक रहन्छ, हरेक पल पनि अस्तित्वमा रहन्छ नै। आखिर कहालीलाग्दो यो ब्रम्हाण्ड झैं हरेक पल विशाल समयको एक ‘अणु’ नै त हो। हरेक पलको प्रस्थानसँगै अर्को आरम्भ, एकपछि अर्को, निरन्तर। घडीको टिकटिकजस्तै। जसरी एउटा ...
बिग्रिएको घडीले पनि दिनमा दुई पटक सही समय देखाउँछ रे! तर चालू अवस्थामै भए पनि समय नै गलत ‘सेट’ गरिएको घडीले कहिल्यै सही समय देखाउँदैन। शासन-सत्ता-व्यवस्था परिवर्तन भोग्न हामी जति माहिर छौँ, त्यस्ता परिवर्तनको राप सेलाएर हिउँको चिसो...
विपना र मेरा प्रेम
जीवन नै हो, आफ्नै धुनमा लक्ष्यविहीन निरन्तर बहने हावाझैँ। जीवन नै हो, आज्ञाकारी बालक झैं, निर्धारित सीमाभित्रै बग्ने खोला जस्तैं। तर, कहिले काहीँ हावा पनि उद्दण्ड बनिदिन्छ, आँधी बनेर। कहिलेकाहीँ खोला पनि अशान्त बनिदिन्छ, बाढी बनेर। समय समयमा देखिने सपना जस्ता- क...
वास्तवमा बाबुआमाको रहरभन्दा बाध्यताले परिवारमा तेस्रो सन्तान जन्मन्छन्। समाज अहिले जस्तो खुला बनिसकेको भए सायद मेरो अस्तित्व आमाको गर्भमा नै तुहिन्थ्यो। तर पनि काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या चार लाखको नजिक पुग्दा म पनि त्यो गणनाको एउटा अंक बन्न पुगेँ। हरेकतिर...
हिमालमा हिउँको आयु अनि समुद्रमा पानीको आयु जसरी तय हुँदैन हो त्यसरी नै जीवनका अनेकौँ मोडमा जोडिएका सम्बन्धको आयु पनि निर्धारित हुँदैनन्। हिमालको हिउँलाई पग्लेर पानी बन्नुपर्ने दिन थाहा हुँदैन, समुद्रको पानीलाई वाफका रूपमा बादल बन्नुपर्ने दिन पन...
कहाँ जुनी काट्ने मेसो मात्र, जीवन त अनौठो संयोगहरूको गुच्छा पनि हो। कहाँ संयोगको सगरमाथा मात्र, आश्चर्यको समुद्र पनि त हो। जबदेखि मानव जातिको मस्तिष्कमा सामान्य चेतना जाग्न थाल्छ, तबदेखि सम्बन्ध र चाहनाका असीमित पहाड पनि खडा हुँदै जान्छन्। त्यसैले मस्तिष्क जति छि...